Serivisy fanodinana fandrosoana any Sina - Casting Minghe
Ny fizotran'ny fitsaboana aorian'ny famonoana dia misy ny fanadiovana ireo faritra maty fanariana, ny fitsaboana amin'ny vy, ny famonoana ary ny fanalefahana ary ny vahaolana fanalefahana. Ny asa fanadiovana die casting dia misy ny rindranasa rafitra fandrarahana, ny rindran-damina amin'ny rafitra misimisy kokoa, ny fanesorana ny burrs sy ny burrs, ny fitsaboana amin'ny metaly ny fanariana azy ary ny vahaolana plastika sy hatsaran-tarehy. Ny fanesorana ireo casting maty dia sarotra kokoa, ary ny habetsahan'ny asa matetika dia imbetsaka na folo heny noho ny fanariana maty aluminium. Noho izany dia tena ilaina ny mitazona ny teknolojia manampahaizana manokana sy mandeha ho azy amin'ny fanesorana ireo casting maty.
Fanesorana ireo rindrambaiko / Rindrambaiko firotsahana ao anaty rindran-damina / Rindrambaiko rafitra mihosin-drano
Ny lakilen'ny asa vita tanana dia ny fampiasana fitaovana manokana toy ny mallet, plastika misy orona ary antsy mahasosotra hanatanterahana asa fanesorana vita tanana. Ny tombony dia ny fahatsorana sy ny fanamorana; ny fatiantoka dia ratra tsy ara-dalàna, fahasimbana mora amin'ny casting ary ny fiovan'ny casting. Ny asa vita tanana dia tsy mety amin'ny faritra matevina sy salantsalany ary faritra sarotra.
Ny lakilen'ny asan'ny fitaovana mekanika dia ny fampiasana fitaovana indostrialy toy ny milina fanetezana, masinina fanatsofana CNC, milina fanaovana totohondry haingam-pandeha, milina fanodinam-bokatra efatra, tsindry fikororohana ary fitaovana indostrialy hafa ho an'ny asa fanondrahana. Ny tombony dia ny ratra milamina sy mahazatra, tsy mora manimba ny fanariana, ary avo ny asany.
Ny lakilen'ny fiasan'ny teknolojia mandeha ho azy dia ny fampiasana robot manan-tsaina hamongorana azy ireo, esorina ny burrs sy ny lozisialy momba ny rindranasa sy ny rindranasa momba ny rafitra mihoampampana, ary hitazomana ny fahombiazana avo lenta sy ny famokarana maintso amin'ny asa fanaingoana sy fanavaozana.
Fitsaboana roa metaly
Ny fanesorana ny amponga sy ny hovitrovitra dia mety amin'ny casting amin'ny ankapobeny
Ny fiantraikan'ny tifitra sy ny fanesorana ny harafesina dia ny fanesorana ny refin'ny rivotra, ny sisa tavela, ny burrs, sns.
Ny vokany sy ny fitsipika fototry ny fanesorana famaohana fasika ary ny fanesorana ny harafesina dia manala azy
Fitotoana, fikosoham-bary ary famafana Misafidiana fitaovana fikosoham-bary, fikosoham-bary sy milina poloney ary akora hafa, toy ny vato fikosoham-bary, fametahana totozy, tsiranoka polishing, ary rano, hikirakira na handemotra ny velaran'ny fitaratra mba hanesorana ireo marika sisa tavela rehefa nesorina ny fanariana. Na mahazo fampisehoana dingana milamina sy tsy miova.
Vahaolana fandidiana plastika
Ny vokatra mafana dia ny fanamafisana ny fanariana maty tsy mihozongozona amin'ny mari-pana amin'ny rindrambaiko, ary avy eo mampiasa fitaovana fikolokoloana vokatra na fitaovana fametahana fitaovana hanatanterahana ny famokarana na fanodinana fitaovana mekanika.
Ny vokany mangatsiaka dia mampiasa fitaovana na fitaovana fikolokoloana vokatra manokana, fanaka fampitaovana hanatanterahana ny famokarana tanana na ny fanitsiana ny fiatraikany amin'ny fitaovana mekanika amin'ny famoahana maty tsy milamina amin'ny hafanan'ny efitrano.
Poloney fanodinam-baravarana: fanodinam-baravarana vita amin'ny tànana vita amin'ny tànana vita amin'ny tànana vita amin'ny tànana sy poloney Noho ny toetran'ny havia sy havanana, ny fizotry ny fitsaboana ny fanary metaly zinc dia lasa ampahany lehibe aminy.